ဘရာဇီးအတွက်ကုမ္ပဏီထူထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအခါ, သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်အများအပြားအချက်များရှိပါသည်။ အခြားအကမ်းလွန်ရွေးချယ်စရာလူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်တွင်ဘရာဇီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနည်းနည်းပိုခက်နှင့်ရှည်ရှည်ဖြစ်နိုငျသညျ, ကနေရှေးခယျြဖို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, ဤနေရာတွင်ငါတို့သည်သင်တို့ဘရာဇီးမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အချက်များအဖြစ်ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်နှိုက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
ဘရာဇီးခုနှစ်တွင်တစ်ဦးက Business Up ကိုချိန်ညှိခြင်း - စဉ်းစားကြည့်ပါ
သင်ဘရာဇီးကိုလိုက်ရန်ရည်ရွယ်နှင့်သင့်အောင်မြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအချက်များအချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်, စက်မှုလုပ်ငန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လူများနိုင်ငံသားအဖြစ်ဘရာဇီးအတွက်တက်ကြွစွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များသုံးသပ်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘရာဇီးရှိစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်ကတခြားရွေးချယ်စရာစဉ်းစားသင့်ပါလျှင်ဘယ်လောက်အောင်မြင်တဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းကူညီသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိုအပ်သောဘာသာစကားလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အများစုမှာပေါ်တူဂီခုနှစ်တွင်ပြီးစီးရန်လိုအပ်ပါသည်, နှင့်ဘရာဇီးအခွင့်အာဏာဝက်ဘ်ဆိုက်များလက်ရှိပေါ်တူဂီ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ ဒီဘာသာစကား၏တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအများအပြားမူကွဲတည်ရှိစဉ်ကတည်းကသို့သော်ပင်ကျေနပ်ဤဘာသာစကားကိုလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ, ပျေါတူဂီအမျိုးအစားဘရာဇီးစကားအတွက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။
သင်တို့သည်လည်းသင့်ကုမ္ပဏီဘရာဇီးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, တည်နေရာများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်နှင့်ပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ အများစုမှာအထူးကုဒီဆုံးဖြတ်ရန်သင် (ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအေးဂျင့်နှင့်အတူစကားပြောဖို့အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
ဘေးဖယ်ဘရာဇီးအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သောအခြေခံအဆင့်များအနေဖြင့်, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေထိုင်ပေါ် မူတည်. သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အပိုဆောင်းပါမစ်ရရှိရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာမြို့တော်စည်ပင်ကနှင့်အတူဤအလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အလားအလာဘရာဇီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဘရာဇီးမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာသတိထားမိဖြစ်သင့်နောက်ထပ်အရာအစိုးရ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်သောဗျူရိုကရေစီ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးအတွက်အချို့ဒေသများတွင်ဒါဘရာဇီးသင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. လိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါ, ဗဟိုအစိုးရနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ရံဖန်ရံခါကဒီကုမ္ပဏီတွေဟာမစတင်လိုသောလူတို့အဘို့နှောင့်နှေးစေနှင့်အခြားကမ်းလွန်နိုင်ငံများတွင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအစဉ်အမြဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မဟုတ်တောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားအခြားအကမ်းလွန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်တရားစီရင်မှုကကမ်းလှမ်းအဆိုပါအခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဘရာဇီးအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ယေဘုယျအားနှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံသားများပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးမြင့်မားသောအခွန်နှုန်းထားများပေးဆောင်။ ထို့ပြင်အခွန်တခါတရံကြောင့်အစိုးရဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု၏မရှိခြင်း, ခြေရာခံနားလည်ပြီးဆပ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီဟာဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်စည်ပင်သာယာအခြေခံပေါ်မှာအခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်, သင်ကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းများအတွက်ဘရာဇီးရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ (ဥပမာဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအေးဂျင့်နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ ဘရာဇီးရဲ့နာမညျကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နည်းနည်း untypical ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်နိုင်ငံပိုင်ကျယ်ပြန့်မဟုတ်, တိုင်းပြည်-wide အဆင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခံရဖို့ကုမ္ပဏီအမည်များကိုလိုအပ်သည်။ အများစုမှာမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်အမည်များရရှိမှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. စစ်ဆေးမှုများပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါအေးဂျင့်ပြီးတော့ဆွဲသွင်းပါဝင်၏လက်မှတ်ရရှိရန်မှတ်ပုံတင်မှတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဘို့အသင်းက၎င်း၏စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများဖွဲ့စည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဒါရိုက်တာကသူတို့အပြည့်အဝအမည်များ, မွေးဖွားရက်စွဲများ, လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့်လိပ်စာများကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးလည်းသူတို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကို၏သက်သေပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာခြေလှမ်းကားမောင်းသူရဲ့လိုင်စင်, အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကတ်များ, ဒါမှမဟုတ်ပတ်စ်ပို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
သင့်ရဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးလိပ်စာများ၎င်းတို့၏သက်သေတင်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ utility ကိုဥပဒေကြမ်းများသို့မဟုတ်အဟောင်း 90 ရက်ပေါင်းထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပြန်ချက်များအချို့အမျိုးအစားများကိုပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ဤဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဘရာဇီးပြင်ပကနေကြွလာ, ဒါမှမဟုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ရုံးအားဖြင့် (တစ်ဦး authenticatication တံဆိပ်ခေါင်းနှင့်အတူတံဆိပ်ထု) apostilled ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်သွားလာရင်း-အကြားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဘရာဇီးလ်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအစိုးရရုံးစာရွက်စာတမ်းများ၏လကျအောကျခံကိုင်တွယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဒေသခံတဦးအေးဂျင့်ကိုလည်းဘရာဇီး၏နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရပါမည်, သို့မဟုတ်လည်းအမြဲတမ်းဗီဇာနှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မည်သည့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်နှင့်ကြုံတွေ့ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဆွဲသွင်းပါဝင်အေးဂျင့်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးရယူသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးဥပဒေရေးရာစာတမ်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်လည်းဘဏ္ဍာရေးစာရွက်စာတမ်းများ, မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီစာတမ်းများအမျိုးမျိုးမှအလုပ်ဖြစ်တယ်အမှု၌တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးအရည်အချင်းပြည့်မီရန်ဘရာဇီးမှာတည်ရှိပါတယ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဆွဲသွင်းပါဝင်အေးဂျင့်သင်တို့အဘို့ဤအစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဘရာဇီးအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်မျှဝေစုမြို့တော်နိမ့်ဆုံးရှိပါတယ်။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများကြောင့်ပြောင်းလဲသွား-ထိုကဲ့သို့သောမှ non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရန်အမြဲတမ်းဗီဇာလျှောက်ထားအတိုင်းဤ option ကိုလိုအပ်မယ်ပေါ်ထွန်းကြဘူး။ သင်တို့သည်ဤတတ်နိုင်သမျှစည်းမျဉ်းအတက်အကျသုတေသနနှင့်သင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အားဟောပြောသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ရှယ်ယာရှင်များစာရင်းအခါ, နှစ်ခုသာလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နိုင်ငံသားအရေးမထားဘူး။ ဒါ့အပြင်ရှယ်ယာရှင်များပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်ဆန်ခါတင်လည်းဘရာဇီးအတွက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
သင်သည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်တွေနဲ့ဆွဲသွင်းပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ပြီးတာနဲ့သင်တစ်ဦးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏လက်မှတ်, ဝေစုလက်မှတ်များ, သင်၏နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်နှင့်အခကြေးငွေနှစ်ဦးစလုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသထေူတဲ့အစိုးရငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေးလိမ့်မည်။
ဘရာဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အချို့နဲ့အခြားတရားစီရင်မှုအတွက်ထည့်သွင်းသကဲ့သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောဖြစ်ကိုမသိရပေမယ့်, အဲဒီမှာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဘရာဇီးမှာအံ့သြဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများကိုသတင်းပို့ကြဘူး။ သင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်အဖြစ်တရားဝင်နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့, သင်၏စာရွက်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်တင်သွင်းနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်, သင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်အတူနီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့သေချာပါစေ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တည်ရှိသောနံပါတ်နှင့်ပုံစံရှိပါတယ်။